Xildhibaan Ciiro oo Sheegay in ay la Socdaan Lacagaha la Sheegayo in la Lunsaday | Anti-Tribalism
← Odayaashii dhaqanka beelaha Puntland oo ka dareeray shirkii ka socday Muqdisho, dibna ugu laabtay magaalada Garoowe
Wadaad Iyo Kursiga-Siyaasadda Maxaa Kala Heysta? →
Xildhibaan Ciiro oo Sheegay in ay la Socdaan Lacagaha la Sheegayo in la Lunsaday
Xildhibaan Daahir Cabdulqaadir Ciiro oo ka tisan Mudanayaasha barlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay Hadalkii dhawaan ka soo yeeray Baanka Caalamka oo sheegayay in ay jiraan Lacago la Musuq Maasuqay.
Xildhibaan Ciiro ayaa qiray in ay jiraan wararka ka soo yeeray Bangiga adduunka markii shirku uu ka soconayay Magaalada istanbuul ee Carriga Turkiga.
Xildhibaanka ayaa hoosta ka xarriiqay in Lacagahaas uu sheegayo baanka adduunka in ay jiraan isla markaana Sanadadii 2009kii iyo 2010kii xiligaas ay sax tahay in Lacagtaas la Lunsaday isla markaana si gaar ah loogu Takri falay.
Daahir Ciiro ayaa Farta ku fiiqay in ay si weyyn ula socdaan in Lacagahaasi ay ku maqan tahay waa siduu hadalka u yiriye Wasiirkii Maaliyadda ee Xiligaas kaasoo uu sheegey inuu ahaa Guddoomiyaha Iminka ee Barlamanka Shariif Xasan Shiikh Aadan.
Xildhibaan Ciiro ayaa intaa ku daray in Waqtigii uu Wasiirka ka ahaa wasaaradda Maaliyadda Shariif Xasan inuu didday inuu Barlamanka hor yimaado si loola xisaabtamo taasina ay caddeyneyso in Tuhunku Xaggiisa si weyn ugu jiro.
Dhawaan ayay ahayd war qoraal ah oo uu soo saaray bangiga adduunka uu ku sheegay in Lacago ay bixiyeen dalalka Deeqda bixiya looguna tala galay Dawladda Federaalka Soomaaliya in la lunsaday Lacagtaas oo la sheegay in ay gaareysey Boqol Milyan oo Doolarka Maraykanka ah.
Sidoo kalena dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu soo dhaweeyay warka ka soo yeeray bangiga adduunka isagoona sheegay in ay diyaar u yihiin in Lacagtaas la ogaado halka rasmi ahaan ay ku danbaysey.
Si kastaba iyadoo ay jiraan Eedeeymahaa ka soo yeeraya Baanka adduunka ayaa haddana Xukuumaddu waxa ay ka cabanaysaa inaysan weli soo gaarin Lacagihii ay ku yabooheen Beesha Caalamka si wax loogu qabto hawlaha Road Mapka